डाक्टरका साथै औषधि अभाव
As of Fri, 14 Aug, 2020 19:40
अस्पतालमा उपचार समस्या
प्यूठान अस्पताल विजुवारमा पुग्ने बिरामीले उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन् । दरबन्दीअनुसार डाक्टरको रिक्तताका कारण उपचार सेवा प्रभावित भएको अस्पतालमा आर्थिक अख्तियारी समेत नहुँदा समस्या बढ्दै गएको हो ।
लामो समयदेखि अस्पतालमा डाक्टर र औषधि अभावमा गाउँगाउँबाट उपचारका लागि पुग्ने बिरामीले उपचार सेवा पाउन नसकेका हुन् । सरकारी अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार पाउने भन्दै गाउँगाउँबाट विरामी अस्पताल पुग्ने गरे पनि पछिल्लो समय सेवा नपाउँदा समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
लामो समयदेखि अस्पतालमा अधिकार प्राप्त व्यक्ति नहुँदा प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको निमित्त प्रमुख खिमप्रसाद पार्धेले बताए । “असार मसान्तपछि औषधि खरिद प्रक्रियासमेत रोकिएको छ,” निमित्त प्रमुख पार्धेले भने, “अधिकार प्राप्त प्रमुख नहुँदा सेवा नै ठप्प हुने अवस्थामा छ ।” अस्पतालमा सामान्य औषधिदेखि केमिकल नहँुदा ल्याब सेवा सञ्चालनमा समेत समस्या बढ्दै गएको उनले बताए ।
अस्पतालमा औषधि नहुँदा स्वास्थ्य बीमा गराएका बिमितले समेत औषधि पाउन सकेका छैनन् । बिमा कार्यक्रमले दिनप्रतिदिन बिरामीको चाप अस्पतालमा बढाए पनि औषधि र उपचार नपाउँदा बिरामी आक्रोशित हुने गरेका छन् । “डेढ महिनादेखि अस्पत्तालबाट औषधि पाएको छैन,” उपचारका लागि प्यूठान अस्पताल आएका प्यूठान नगरपालिका–१० मरन्ठानाका केशव खड्काले भने, “बिमा कार्ड झोलामा राखेर मेडिकलवाट औषधि किन्नु परेको छ ।” डाक्टरको सल्लाहअनुसार नियमित रक्तचापको औषधि खाँदै आएको उनले बताए ।
गत माघ महिनामा अस्पताल प्रमुख अच्युत कार्कीको सरुवा भएपछि अस्पताल कार्यालय प्रमुखविहीन बनेको छ । कार्कीको सरुवापछि डा. शेषराज घिमिरेले निमित्त प्रमुख भएर नियमित सेवा तथा प्राशनिक काम सञ्चालन गरे पनि पछिल्लो समय समस्या भएको हो । तत्कालीन समय अस्पतालमा लेखा प्रमुखको अभाव र पछिल्लो समय आर्थिक अख्तियारी सहितको कार्यालय प्रमुख नहुँदा अस्पताल समस्यामा रुमलिएको हो ।
अहिले दरबन्दीअनुसार लेखापालको पदपूर्ति भए पनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा औषधि खरिद, अन्य उपकरण खरिदजस्ता आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा सेवा प्रवाह नै प्रभावित भएको छ । यसअघिका निमित्त प्रमुख शेषराज घिमिरे अध्ययन बिदामा बसेपछि असोज महिनामा प्रदेश सरकारले डा. बद्री वैदवारलाई काज खटाएको थियो । वैदवारले बिरामी मात्रै हेर्ने वा कार्यालय प्रमुख भई प्रशासनिक काममात्रै गर्ने अस्पताल विकास समितिसँग शर्त राखेर हाजिरी नगरी फर्किएपछि समस्या झन बल्झिएको हो ।
मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित १५ जना डाक्टरको दरबन्दी रहे पनि हाल पाँचजना मात्र रहेका छन् । त्यसमा पनि एकजना निक साइमन इन्स्टिच्युडको तर्फबाट राखिएको हो । अस्पतालको समस्या समाधानका लागि अस्पताल विकास समितिको बैठकले करारमा डाक्टर राख्ने निर्णय गरी विज्ञापन गरे पनि हालसम्म भर्ना प्रक्रिया पूरा भएको छैन । अख्तियार प्राप्त कार्यालय प्रमुख नहुँदा भर्ना स्थगित भएको छ । “अस्पताल स्तरोन्नति भएर ५० शैया भए पनि सेवा सुविधा झन खस्किदै गयो,” नागरिक सरोकार समाज प्यूठानका संयोजक सुमन सुवेदीले भने, “अस्पतालमा शव पोष्ट मार्टम पनि हुन नसक्ने भयो ।”
कोरोना संक्रमणसँगै मृत्युको बढ्दो ग्राफ
सप्तरीमा एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु
दुई दिनमा आठ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु